KANAAREE GUDDISTI JABBII- walaloo bareedaa – Beekan Guluma Erena
KANAAREE GUDDISTI JABBII- walaloo bareedaa	Beekan Guluma Erena
Poems May 2, 2016BEEKAN GULUMMAA
17SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
KANAAREE GUDDISTI JABBII ????
Osuman arguun, beekuun
dhiise malee callisee.
Kun guddina koo ta’aaree
Mucha qofa harkisee.
Alkan wal hin arginu
Guyyaas nu bobbaasu qophaa.
Yeroo Okolee guutuu Elman
Anattoo maaltu cophaa ???
Booree, booqilee jechaa
Mucha gogaatti gad-nadhiiftu
Xiqqoollee hin saalfattanii.
Osoo haati koo na hin nuffiin
Isin irraa na gaaditu.
Lakkii himadheeraa na dhiisaa
Gaafan guddadhe gaabbitu.
Wadaroon na hidhanii
Hodhuuf yemmuun wixxisu.
Hanga keessaa fixanitti
Dullaadhaan na Ittisu.
Waan na guddiftan fakkaattanii
Miidhaa narratti dalagdu.
Jabbiin marga haa dheeddu jechuun
Aannan haadha koo na lagdu.
Shan itti deddeebi’anii
Akka Aaannan qabu Ilaalu.
Yoo waa keessatti haftellee
Isheeyyuu dhoqqee faalu.
Kan har’aa qofa hin laaliinaa
Mee kan boruu xiinxalaatii.
Sangaatti jijjiirama bar
Maqaan ta’ee jiru waatii.
Garuu jabbiin hundumtuu
Akkum kanaan guddataa ??
Inuman arga, dhaga’as
Namnoo waa dudubbataa !!
Mee waaqumaa jedhaatii
Kanaaree guddisti jabbii ??
Ati hundasaa ni argita
Sitti dhiise yaa Rabbi !!!!!!!
<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJawarmd%2Fvideos%2F10102241480272363%2F&show_text=0&width=560″ width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa17SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← ULFAA’UU/MUCAA GODHACHUU -Karooraafi Tarsiimoolee eeggannaa tokko tokko!!
SIBIILAA KENNOO-hayyuu Karaatti cite!-Habashaan Nyaatamuun Aadaa nuuf ta’aa jira! →